လမ်းသွားနေတုန်း ရုတ်တရက် ကိုယ့်နားကို လက်ပစ်ဗုံး ကျလာရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ? – Shwe Likes
လမ်းသွားနေတုန်း ရုတ်တရက် ကိုယ့်နားကို လက်ပစ်ဗုံး ကျလာရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ?
G Shwe | May 22, 2021 | Knowledge | No Comments
အားလုံး အန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက် လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံး ရဲ့ ပေါက်ကွဲပုံ ပေါက်ကွဲနည်းတွေကို အကြမ်းဖျင်းလေး sharing လုပ်ပေးပါ့မယ် …
လက်ပစ်ဗုံး (Grenade) ဆိုတာ ယမ်းတွေ သိပ်ထည့်ထားတဲ့ ယမ်းလုံးကြီးတစ်ခုပါပဲ ..ဗုံးပစ်ခါနီး ရင် ဆွဲဖြုတ်ရတဲ့Safety pin လို့ ခေါ်တဲ့ လက်ပစ်ဗုံးက အကွင်းလေးက အရမ်း မာတင်းပါတယ် …
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါသလို Safety အကွင်း ကို သွားနဲ့ ကိုက်ဖြုတ်ဖို့ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ သွားဟာ ဟာကြူလီလိုသန်မာ နေမှ ရပါလိမ့်မယ် သာမန်လူအနေနဲ့ကတော့ သွားနဲ့ကိုက်ဖြုတ်ဖို့ ဆိုတာ တကယ်မလွယ်တာပါ ….safety pin လေး ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ အထဲက စနက်တံက မီးစ မလောင်သေးပါဘူး
ဘေးနားက safety lever လို့ခေါ်တဲ့လက်ညှစ်တံလေးကို ညှစ်ပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်မှ သာ အထဲက စနက်တံက မီးစတင် လောင်ကျွမ်းတာပါ ။ လောင်ကျွမ်းချိန်က4second ပါ ဗုံးပစ်တဲ့ လူက Safety lever ကို လွှတ်ပြီး လှမ်းပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဗုံးက ကိုယ့်နားကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာ3second လောက်ပဲ ကျန်ပါလိမ့်မယ် ..
ဗုံးက ကိုယ့်ရှေ့နားကို ဘုတ်ခနဲ ကျလာပြီ ဆိုပါတော့…ခင်ဗျား3second နဲ့ ဘယ်နားပြေးမလဲ ?
ဗုံးတွေရဲ့ ပေါက်ကွဲပုံက သူရဲ့ 45° degree အထက်ကို ဖြန့်ပြီး ပေါက်ကွဲတာမျိုးပါ အဲ့ဒီ့တော့ ခင်ဗျား 45 degree အောက်ရောက်နေရင် ဘေးကင်းပါတယ် ..ဆိုတော့ကာ ကိုယ်ရှေ့နား လက်ပစ်ဗုံးကျလာပြီဆိုရင် ဘယ်မှ မပြေးပါနဲ့ ကွဲသံပြီးသည်အထိ ပြားပြားဝပ်နေပါ
ဗုံးကွဲသံကြောင့် နားအူသွားတာမျိုး Stun ဖြစ်သွားတာမျိုးပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ..ဗုံးဟေ့ ဆိုတာနဲ့ ထိုးဝပ် လိုက်ပါ အကာအကွယ်မှာ နေတဲ့သူဆိုလည်းကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုးဝပ် လိုက်ပါမတ်တပ်ကြီးနဲ့ လျှောက်ပြေးမနေပါနဲ့
ကြမ်းပြင် ပေါ်ဝပ်ဖို့လည်း ရှက်မနေပါနဲ့ ကိုယ့်အသက်လောက် ဘာမှ အရေးမကြီးပါဘူး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ ….
အားလုံး အႏၲရာယ္ကင္းဖို႔အတြက္ လက္ပစ္ဗုံးတစ္လုံး ရဲ႕ ေပါက္ကြဲပုံ ေပါက္ကြဲနည္းေတြကို အၾကမ္းဖ်င္းေလး sharing လုပ္ေပးပါ့မယ္ …
လက္ပစ္ဗုံး (Grenade) ဆိုတာ ယမ္းေတြ သိပ္ထည့္ထားတဲ့ ယမ္းလုံးႀကီးတစ္ခုပါပဲ ..ဗုံးပစ္ခါနီး ရင္ ဆြဲျဖဳတ္ရတဲ့Safety pin လို႔ ေခၚတဲ့ လက္ပစ္ဗုံးက အကြင္းေလးက အရမ္း မာတင္းပါတယ္ …
႐ုပ္ရွင္ေတြထဲမွာပါသလို Safety အကြင္း ကို သြားနဲ႕ ကိုက္ျဖဳတ္ဖို႔ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ သြားဟာ ဟာၾကဴလီလိုသန္မာ ေနမွ ရပါလိမ့္မယ္ သာမန္လူအေနနဲ႕ကေတာ့ သြားနဲ႕ကိုက္ျဖဳတ္ဖို႔ ဆိုတာ တကယ္မလြယ္တာပါ ….safety pin ေလး ျဖဳတ္လိုက္တာနဲ႕ အထဲက စနက္တံက မီးစ မေလာင္ေသးပါဘူး
ေဘးနားက safety lever လို႔ေခၚတဲ့လက္ညွစ္တံေလးကို ညွစ္ၿပီး ျပန္လႊတ္လိုက္မွ သာ အထဲက စနက္တံက မီးစတင္ ေလာင္ကြၽမ္းတာပါ ။ ေလာင္ကြၽမ္းခ်ိန္က4second ပါ ဗုံးပစ္တဲ့ လူက Safety lever ကို လႊတ္ၿပီး လွမ္းပစ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ဗုံးက ကိုယ့္နားကိုေရာက္တဲ့ခ်ိန္မွာ3second ေလာက္ပဲ က်န္ပါလိမ့္မယ္ ..
ဗုံးက ကိုယ့္ေရွ႕နားကို ဘုတ္ခနဲ က်လာၿပီ ဆိုပါေတာ့…ခင္ဗ်ား3second နဲ႕ ဘယ္နားေျပးမလဲ ?
ဗုံးေတြရဲ႕ ေပါက္ကြဲပုံက သူရဲ႕ 45° degree အထက္ကို ျဖန့္ၿပီး ေပါက္ကြဲတာမ်ိဳးပါ အဲ့ဒီ့ေတာ့ ခင္ဗ်ား 45 degree ေအာက္ေရာက္ေနရင္ ေဘးကင္းပါတယ္ ..ဆိုေတာ့ကာ ကိုယ္ေရွ႕နား လက္ပစ္ဗုံးက်လာၿပီဆိုရင္ ဘယ္မွ မေျပးပါနဲ႕ ကြဲသံၿပီးသည္အထိ ျပားျပား၀ပ္ေနပါ
ဗုံးကြဲသံေၾကာင့္ နားအူသြားတာမ်ိဳး Stun ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ ..ဗုံးေဟ့ ဆိုတာနဲ႕ ထိုး၀ပ္ လိုက္ပါ အကာအကြယ္မွာ ေနတဲ့သူဆိုလည္းၾကမ္းျပင္ေပၚ ထိုး၀ပ္ လိုက္ပါမတ္တပ္ႀကီးနဲ႕ ေလွ်ာက္ေျပးမေနပါနဲ႕
​ၾကမ္းျပင္ ေပၚ၀ပ္ဖိို႔လည္း ရွက္မေနပါနဲ႕ ကိုယ့္အသက္ေလာက္ ဘာမွ အေရးမႀကီးပါဘူး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းၾကပါေစ ….
မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာ ကိုဗစ်ရောဂါ ပိုးကူးစက်ခံနေရပြီလားဆိုတာ အလွယ်တကူ သိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း
ကျော်ကြီးဟာ… သူ့ချစ်သူ အိချောပိုရဲ့ ဖခင် ဦးပန်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်…..
မြေကြီးတူးဖို့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတဲ့ နေရာတွေ မှာ အရေးပေါ် ဗုံးခိုကျင်း ပြုလုပ်နည်း
မြေကျင်းတူးဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ နေရာတွေမှာ အရေးပေါ် ဗုံးခိုကျင်း ပြုလုပ်နည်း